Eyaziwa nangokuthi isifo sikaHansen, iqhenqa yintsholongwane yesikhumba ebangelwa yi-mycobacterium. Iqhenqa yayisisigxina kunye neqhenqa laye lahlukana kwiikoloni; namhlanje usulelo luyaphiliswa kalula - luyinto nje yokufikelela kumaxhoba esi sifo kunye nokulwa namacandelo ezentlalo azungezile. Iqhenqa ayinqabile eNtshonalanga kodwa iyaziwa ngokubanzi ngokubhekiselele kwiBhayibhile. Kodwa iziganeko zeBhayibhile ngeqhenqa, nangona kunjalo, ziziintlobo ezininzi zezifo zesikhumba, zimbalwa ukuba ziphi na zezi zifo zikaHansen.
Ngenxa yeembonakaliso zamandulo zibuyela emva kwe-1350 BCE eYiputa, ngezinye iziqhenqa kuthiwa "isifo esidala kunazo zonke" okanye "isifo esidala kunazo zonke." Ngenye indlela, iqhenqa ibonakala ilandele abantu iminyaka eyiwaka, soloko kubangela abo bahluphekayo ukuba baxoshwe kwiindawo zabo kwaye bakhuthaze inkolelo yokuba abagulayo bahlwaywa nguothixo.
Iqhenqa kwiTestamente Endala
KwiTestamente Endala yeBhayibhile, iqhenqa lisoloko libhekiswa njengesigulo esingaxhatshali nje abantu, kodwa nezindlu kunye neendwangu. Ukubhekisela kwiqhenqa ngokucacileyo akukhona kwinto eyaziwa njengeqhenqa namhlanje, kodwa iintlobo zeengxaki zesikhumba kunye nolunye uhlobo lwe-mold okanye isikhunta esinokuchaphazela izinto. Umnqophiso wokuqonda iqhenqa kwiTestamente Endala kukuba kubonakala njengendlela yokungcola ngokomoya nangokomoya okufuna ukuba umntu angabandakanywa ngaphandle kuluntu.
Iqhenqa kwiTestamente Entsha
KwiTestamente Entsha , iqhenqa lidla ngokuba yinto yokuphilisa kukaYesu. Abantu abaninzi abaphethwe yiqhenqa "baphiliswa" nguYesu, owathi ngamanye amaxesha unokubaxolela izono zabo. Ngokutsho kukaMateyu noLuka, uYesu ugunyazisa abafundi bakhe ukuba baphilise iqhenqa egameni lakhe.
Iqhenqa njengeMpilo yeZonyango
Iimbalwa ezimbalwa ngaphandle kwezilwanyana zinokubamba iqhenqa kwaye iindlela zokusasazeka aziwa. I-mycobacterium ebangela ukuba iqhenqa litshintshe kakhulu ngenxa yeemfuno zalo. Oku kukukhokelela ekuphuhlisweni kwesifo kodwa kwakhona kuthintela abaphandi ukuba bangadala imveli kwibhu. Umzamo womzimba wokulwa nokusuleleka kukukhokelela ekubhubhiseni kwamathambo amaninzi kwaye ngoko kuncibilika okubangela ukubonakala kokubola.
Ukuphakama kukaYesu: Inkcazo yeBhayibhile yeBhayibhile
Ukuphononongwa kweeMovie, 2001 - 2015
Konke malunga noMthendeleko wenyanga yaseTshayina
Kuthetha ntoni i-Konnichiwa ngesiJapan?
Indlela yokugqoka kwiindawo
Yintoni i-Deep Time?
Ubungqina okanye Ubungqina?